निस्कासन भयो १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपियो , कति दिने आवेदन ? ⋆ afno sansar
निस्कासन भयो १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपियो , कति दिने आवेदन ?
प्रकासित : ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०५:१८
एनएमबि बैंकले डेढ १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र आज (जेठ ९ गतेदेखि) निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ ।
बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख इकाई ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ९ लाख इकाई बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्नेछ भने बाँकी ६ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्नेछ ।
बैंकले १५ वर्ष अवधिको ‘एनएमबि उर्जा ऋणपत्र ४% – २०९२-९३’ जारी गर्न लागेको हो । यसमा वार्षिक ४% ब्याजदर रहनेछ । बिक्री प्रबन्धकको काम हिमालयन क्यापिटलले गर्नेछ ।
लगानीकर्ताले उक्त ऋणपत्रमा जेठ ९ गतेदेखि छिटोमा जेठ १२ गते र जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम ८ लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।एनएमबि बैंकलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ ए माइनस’ रेटिङ दिएको छ । उक्त रेटिङ पाउने कम्पनी वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित मानिन्छन् । यस्ता संस्थाहरुमा न्यून कर्जा जोखिम रहन्छ ।
उक्त ऋणपत्रमा सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर सफ्टवेयरमार्फत अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । अर्थ संसार बाट
शुक्रवार मध्यरातमा गरिएको संसद विघटनविरुद्ध कानूनी तथा राजनीतिक लडाईँमा जाने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सांसदहरुको भेला आइतबार हुँदैछ ।
बिहान ११ बजेपछि संसद भवनको ल्होत्से हलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आफ्नो समर्थन दिएका विपक्षी गठबन्धनका १४९ सांसद भेला हुने जनाइएको छ ।
९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०५:१८